ओलीले बेग्लै तयारी गरेपछि एमाले स्थायी समिति बैठक नै स्थगित — Imandarmedia.com
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेपछि नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । मंगलबार एक बजेका लागि तय भएको बैठक स्थगित गरेर ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो २ बजे देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न कार्यक्रम तय भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार संसद विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई २८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
अब के हुन्छ विवादित संवैधानिक नियुक्ति ?
सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको छ । सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै आज साँझसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिएको छ ।
योसँगै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्पत गरेका विवादित संवैधानिक नियुक्तिको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।
लगत्तै संवैधानिक निकायहरुमा ठूलो संख्यामा नियुक्ती गरियो । सो नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा गएका छन् । सभामुखकै रिट सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेको थिएन र हालसम्म सुनुवाइ सुरु हुन सकेकै छैन ।
दोस्रो अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र तीन जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्‍यो । उनीहरुले पनि संसदीय सुनुवाइविनै ४५ दिन कटेपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए ।
संविधानले संवैधानिक नियुक्ति सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदमा राज्यको उपस्थिति खोजेको छ । र संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक नियुक्तिको कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् र धारा २९२ मा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानका यी व्यवस्थाहरु हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवैपटक गरेका नियुक्तिहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशहरु नै विवादास्पद छन् ।
संसदीय सुुनुवाइलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०७५ समेत लागू गरिएको छ । सुनुवाइ समितिले प्राप्त भएको नामावलीमाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने तथा सो अवधिभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएमा प्रस्तावित नाम अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संसदीय सुनुवाइ नहुँदा एकातिर सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको छ भने नागरिकहरु उजुरी गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।
पहिलोपटक सभामुखले सुनुवाइका लागि आएको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए । उक्त सिफारिस फिर्ताले कुनै परिणाम दिन सकेन । दोस्रो पटक सभामुखले सिफारिस फिर्ता गरेनन् । अर्कोतर्फ, संसदीय सुनुवाइ नभई भएको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै नजिर कायम भएको छैन । सर्वोच्चले यसमा व्याख्या गर्नै बाँकी छ ।
सच्याउने कसरी ?
संवैधानिक परिषदमा संसदको अर्थपूर्ण उपस्थिति छ । सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्का सदस्य छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई संविधानको धारा १०१, १३३ (१) र (२), १३७ (३) बमोजिम मात्र हटाउन सकिन्छ ।
मंसिर ३० र बैशाख २१ गते नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु हटाउन संविधानका यी आधारहरु पूरा गरेको हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, उनीहरूको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यतिबेला सबैको आँखा सर्वोच्च अदालतलतिरै छ र अब यसको व्याख्या सर्वोच्चबाटै हुनुपर्ने छ ।
यदि पहिलो पटक नै आएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो भने दोस्रो पटक अध्यादेश आउन सक्ने थिएन । वा प्रधानमन्त्रीले झैँ अध्यादेश ल्याएर संवैधािनक नियुक्ति गर्न पाइन्छ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको भए त्यसले कानुनी रुप लिन सक्थ्यो । तर, यसमा प्रधानन्यायाधीश मौन छन् । मुद्दा अगाडि बढाएका छैनन् ।